Kate Middleton – FemaleWear.net
သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာပွဲမှာ အရင်က ဝတ်ပြီးသား ဝတ်စုံကိုပြန်ဝတ်ခဲ့တဲ့ Kate Middleton
အဝတ်အစားတွေကို အပြင်တစ်ခါသွားရင် မထပ်ချင်ကြတာ ဓါတ်ဖမ်းရင်ဝတ်စုံမထပ်ချင်ကြတာမိန်းကလေးတွေရဲ့မွေးရာပါဗီဇလို့ပြောရမလား? အကျင့်လို့ပဲခေါင်းစဉ်တပ်ရမလား စဉ်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။ ချုပ်လိုက်ကြဝယ်လိုက်ကြဝတ်လိုက်ကြနဲ့ရှုပ်နေတာပဲ? အရင်တုန်းကတော့ မင်းသမီးတွေ model တွေလောက်ပဲအဝတ်အစားကိုမထပ်အောင်ဝတ်ကြတယ်ပဲသိတာ။ အခုတော့ ကိုယ်တိုင်အဝတ်အစားမထပ်ချင်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တုန်းကဝတ်ထားတာကြီးမို့ ဒါကြီးဟိုလကပဲဝတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ ဝတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကို အခုတော့ Kate Middle က ဖောက်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ မင်းသားဝီလီယမ်ရဲ့ ကြင်ယာတော်လေးဖြစ်တဲ့ kate…
BAFTA Awards ကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ Kate Middleton ရဲ့ Fashion က Time’s Up movement ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲ?
Kate Middleton ကတော့ fashion ကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်လို့ အားလုံးကခံယူထားကြလို့ သူမတက်လာသမျှပွဲတွေဆိုရင် သူမရဲ့ fashion ကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြရတာပါ။ အခုလည်း Royal Albert Hall မှာ ညနေုပိုင်းတွင်ပြုလုပ်တဲ့ 2018 BAFTA Awards ရဲ့ red carpet ကို Kate Middleton…